बुद्द एअरले गुल्मी उडान भर्दै ? कान्तिपुरले छाप्यो यस्तो समाचार, के भन्छन् निर्माण समितिका अध्यक्ष पन्त? - Gulminews
बुद्द एअरले गुल्मी उडान भर्दै ? कान्तिपुरले छाप्यो यस्तो समाचार, के भन्छन् निर्माण समितिका अध्यक्ष पन्त?
२०७६ भाद्र २६, ०१:३३
गुल्मीमा रेसुंगा बिमानस्थल निर्माण थालेको झन्डै १४ बर्ष हुन थाली सक्यो । बेलाबेलामा चर्चामा आउने र सेलाउने गरिरहेको रेसुंगा बिमानस्थल गतबर्ष थप एकपटक एकाएक चर्चामा आयो, कारण थियो परिक्षण उडान । २०७५ साल जेठ २५ गते तारा एअरको ट्विनअटर बिमानले धुले माटोमै परिक्षण उडान सम्पन्न पनि गर्‍यो ।
तत्कालिन एमाले नेता प्रदिप ज्ञवाली पर्यटन मन्त्री हुँदा थालिएको निर्माण कार्य १२ बर्ष पछी उनै नेता ज्ञवाली पररास्ट्रमन्त्री हुँदा धुले माटोमै परिक्षण उडान गरिएको थियो । बडो तामझामका साथ गरिएको परिक्षण उडान अवलोकन गर्न मन्त्री ज्ञवाली हेलिकप्टर मार्फत गुल्मी पुगेका थिए । परिक्षण उडानको क्रममा सम्बोधन गर्दै मन्त्री ज्ञवालीले ढिलोमा गत बर्षको दसैं सम्ममा रेसुंगा बिमानस्थलमा नियमित उडान थाल्ने बताएका थिए । त्यो दसैंँमा मन्त्री ज्ञवालीले भने जस्तो नियमित उडान भएन । रेसुंगा बिमानस्थलको चर्चा बिस्तारै सेलाउँदै गयो ।
यती बेला फेरी रेसुंगा बिमानस्थलको चर्चा गाँईगुँई सुनिन थालिएको छ, कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित समाचारको कारण । गत सोमबार कान्तिपुर दैनिकले एउटा खबर छाप्यो बुद्द एअरले गुल्मी सहितका पहाडी जिल्लामा उडान गर्ने भनेर । “दुर्गमतर्फ मोडियो बुद्ध” शिर्षकको समाचारमा सन् २०२० भित्रमा बुद्दले अर्को सहायक कम्पनी स्थापना गरेर हिमाली र उच्च पहाडी भेगतर्फ सेवा विस्तार गर्न लागेको बताईएको छ । बुद्धका प्रबन्ध निर्देशक वीरेन्द्रबहादुर बस्नेतलाई उदृत गर्दै अमेरिकी सेस्ना स्काई कुरियर विमान खरिद गरेर काठमाडौंबाट गुल्मी सहित रुम्जाटार, भोजपुर, ताप्लेजुङ, लुक्ला, पोखरा र जोमसोम र गुल्मी उडान लागिएको जनाईएको छ ।
के भयो के के बाँकी छन् ?
परिक्षण उडान पछी निर्माणको काम शुन्य प्राय: नै छ । जग्गा अधिक्रणको काम धेरै जसो पहिले नै सकिसकेको थियो र बाँकी रहेका अधिक्रणको काम सबै यतिबेला सम्म सकिसकेको छ । नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले निर्माणाधिन रेसुंगा बिमानस्थलको धावनमार्ग कालोपत्रे गर्नको लागि टेण्डर आव्हान गरेर ठेक्का दिए पनि थप काम भने केही भएको छैन । १३ करोड १८ लाख रुपैँयामा ठेक्का दिए पनि निर्माण कम्पनीले काम सुरु नगरीसकेको बिमानस्थल निर्माण समितीका अध्यक्ष मधु कृष्ण पन्तले बताए । “टेन्डरको प्रकृया सकिएको छ”, पन्तले भने, ” उडान शुरु हुन निर्माण कम्पनीले कालोपत्रेको काम सक्नै पर्ने हुन्छ ।” धावनमार्गको लम्बाई ५२० मिटर र चौडाई ३० मिटर रहने पन्तले जानकारी दिए ।
२०२० भित्र गुल्मी पुग्ला त बुद्धको जहाज ?
धावनमार्गको काम सकिए पनी बिमानस्थल सन्चालनको लागि टावर, भवनहरु र अन्य थप पुर्वाधारहरु पनि सम्पन्न हुनु पर्दछ । दैनिक सेवा प्रवाह र सुरक्षाका थुप्रै प्राविधिक सामाग्रीहरुको जडान पनि आवश्यक पर्दछ । २०२० सुरु हुन अब जम्मा साढे ३ महिना समय बाँकी छ । १५ महिना भित्र सबै काम सक्ने चुनौती निर्माण टिमलाई छ । कछुवाको गती भन्दा सुस्त काम गरिरहने प्रबृत्तीलाई रेसुंगा बिमानस्थल निर्माण टिमले चिर्न सकेन भने २०२० भित्रै आफ्नो नयाँ जहाजबाट गुल्मीको नियमित उडान थाल्ने बुद्धको सपना सपनामै सिमित रहनेछ ।
यो पनि पढ्नुस्: रेसुङ्गा बिमानस्थल बारे कस्ले के भने? मन्त्री देखी सर्वसाधारण सम्मको प्रतिकृया (बिशेष भिडियो रिपोर्ट)
गुल्मी मात्र नभएर ५ नम्बर प्रदेशलाई नै हावाईमार्गले जोड्ने भैरहवा बिमानस्थल पछी दोस्रो बिकल्पको रुपमा रहेको गौरबको आयोजनाबाट गुल्मेली मात्र हैन छिमेकी जिल्लाहरुका स्थानियहरु पनि निकै उत्साहित भएका थिए । उनिहरुको आफ्नो घर छेवैबाट जहाज चढेर भैरहवा, काठमाडौं, पोखरा लगायतका गन्तब्यमा पुग्ने जिजिबिषा कायमै छ । सास रहुन्जेल आश भने जस्तो सबैले आशा गरौँ र निर्माण कार्यलाई झक्झक्याउने काम पनि गरी राखौँ ।